गोकुलको करिअर ७० करोडको भुंग्रोमा जल्यो, केपी ओलीको आधा सरकार ढल्यो – Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७६ फागुन ८ गते १९:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । दुई दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वास पात्र मानिने गोकुल बाँस्कोटाका बारेमा भनेका थिए, ‘तुलामा राख्दा मन्त्रिपरिषदका बाँकी सदस्य एकातिर र बाँस्कोटा एकातिर राख्दा तौल बाँस्कोटाकै बढी हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको यो अनुरागमा बिहीबार नराम्रो धक्का लागेको छ । जब सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड घुसमा मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । र, नैतिकताका आधारमा उनले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाए ।
मन्त्रिपरिषदमा ओलीका सबैभन्दा विश्वास पात्र मानिएका बाँस्कोटा बाहिरिएसँगै ओलीकै अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने ‘आधा तुलो चुँडिएको छ, अर्थात् आधार सरकार ढलेको छ ।’
विगत २० वर्षभन्दा लामो समयदेखिका ओलीका विश्वासपात्र रहेका बाँस्कोटाका दलीय पत्रकारिता र अनेरास्ववियूको राजनीतिको आडमा उदाएका व्यक्ति हुन् ।
पत्रकारितामा बाँस्कोटालाई सम्झने पुरानो कारण भने वि.सं. २०४६ सालमा वामपन्थी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई झुक्याएर तत्कालीन शाहज्यादी हेलेन शाहको गाडीमा आन्दोलनका प्रचार सामग्री ओसार पसार गरेका थिए ।
उनी २०३८ सालदेखि अनेरास्ववियु पाचौँमा आबद्ध भई राजनीतिमा होमिए । बाँस्कोटा २०४८ सालमा अखिलको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । पछि तत्कालिन नेकपा एमाले काभ्रेको ०६३ देखि ०७१ सम्म पार्टी प्रमुख (सचिव र पछि अध्यक्ष)को सम्मको जिम्मेवारी सम्हाले ।
उनी अनेरास्ववियुको काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष जुनबेलामा थिए, त्यो बेलादेखि नै ओलीलाई सहयोग गर्दै आएका थिए ।
गोकुल बाँस्कोटाका तित्रे अभिव्यक्तिः ‘पत्रकारहरु दशैं खर्च लिन आउनू’ देखि ‘सरकारलाई हेप्ने’सम्म
जुन समयमा माधव नेपालको तत्कालीन एमालेमा दबदबा थियो त्यो बेलामा ओलीलाई निकै नजिकबाट सघाउने पात्रको रुपमा बाँस्कोटा नै थिए ।
ओलीलाई सघाउने, आफैंमा पनि खरोवक्ता भएकाले उनलाई अखिलको केन्द्रीय सदस्य बन्न निकै सहयोग भएको थियो । उनी अखिलको केन्द्रीय सदस्य मात्रै भएनन्, पछि पार्टीको जिल्ला सचिवहुँदै जिल्ला अध्यक्ष समेत बने । त्यसपछि उनी ओलीसँग झनै नजिक बनेका थिए ।
पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष हुँदै उनी केन्द्रीय नेता बन्नका लागि बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा उठेका थिए, बिडम्बना उनले त्यो बेला जित्न सकेनन् ।
त्योबेला चुनाव हारेपनि जब तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी एक भयो, त्यो बेला उनीलाई चिठ्ठा पर्यो र पूर्णकेन्द्रीय सदस्य बने । त्यसको श्रेय भनेको नै केपी ओली थिए ।
मन्त्री भएपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीको निजी निवास बाल्कोटमा नै बस्दै आएका थिए । अन्य मन्त्रीहरुले मन्त्री क्वाटर प्रयोग गरेपनि बाँस्कोटा भने ओलीको निवासमा बस्दै आएका थिए । आफ्ना सन्तान नभएका ओलीले गोकुललाई छोरासरह मान्ने गरेको नेकपा वृत्तमा ठूलो चर्चा छ ।
ओलीको योगदानकै कारण उनी सञ्चार राज्यमन्त्री बने । बाँस्कोटा ओलीको किचेन क्याबिनकै व्यक्ति भएको कारण सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रीमा बढुवा भए ।
बाँस्कोटाले पछिल्लो समयमा शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
बाँस्कोटा तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालमा संस्थापक पनि हुन । उनी राजनीतिमा सक्रिय नहुन्जेल लामो समय पत्रकारिता पेसामा आबद्ध थिए । उनले पत्रकारिता विषयमा नै स्नातक समेत गरेका छन् ।
उनको पत्रकारिताको यात्रा पञ्चायतकालमा दृष्टि साप्ताहिकबाट शुरु भएको थियो । दृष्टिका साथै चेष्टा, छलफलहुँदै रेडियो नेपालको कार्यक्रम ‘घटना र विचार’हुँदै सम्बोधन साप्ताहिकको सम्पादक समेत बने ।
उनी जुन–जुन सञ्चार माध्यममा आवद्ध भए त्यहाँ उनले केपी ओलीको समर्थनमा नै समाचार लेख्ने गरेका थिए ।
झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष भएको बेला ओली स्थायी कमिटि सदस्य मात्रै थिए । ओली माओवादीको खरो आलोचना गर्थे । त्यो बेला गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रष्ट संकेत गर्दै ‘काँतरले मात्रै माओवादीसँग सहकार्य गर्छ,’ भन्ने शिर्षकमा प्रकाशन गरेको ओलीको अन्तर्वार्ता निकै भाइरल बनेको थियो ।
विस्तारै ओली पार्टीको राम्रो भूमिकामा जान थाले त्यहाँ हुँदा अपेक्षा अनुसारको समाचार लेख्न पाएनन्, जसले गर्दा आफैले सम्बोधन साप्ताहिक शुरु गरे ।
सम्बोधनमा सदैव ओलीको सकारात्मक समाचार मात्रै आउने गरेको थियो । त्यसको कारण भनेको ओलीको विश्वास पात्रमध्येका निकै नजिकका विश्वास पात्र थिए, बाँस्कोटा ।
बाँस्कोटा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुन् । पत्रकारितामा बाँस्कोटालाई सम्झने पुरानो कारण भने वि.सं. २०४६ सालमा वामपन्थी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई झुक्याएर तत्कालीन शाहज्यादी हेलेन शाहको गाडीमा आन्दोलनका प्रचार सामग्री ओसार पसार गरेका थिए ।
उनले ओलीलाई नै समर्थन गर्ने गरी खोलेको सम्बोधन पनि राज्यमन्त्री भएपछि बन्द गरेका हुन् । ओली र बाँस्कोटा सम्भवत धेरै आनीबानी मेलखाने नेताको रुपमा परिचित छन् ।
ओली पनि आक्रमक स्वभावका, बाँस्कोटा पनि त्यस्तै स्वभावका थिए । बाँस्कोटाको प्रस्तुती निकै रुखो खालको छ । जुन अहिलेको मात्रै हैन । उनको पुरानो बानी नै हो त्यो ।
जसको कारण उनले तत्कालीन नेकपा एमालेको पकड क्षेत्र मानिएको काभ्रे २ मा २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा हार व्यहोर्नु पर्यो । त्यो हारलाई उनको मात्रै नभएर समग्र पार्टीको हारको रुपमा चित्रित गरिएको थियो ।
ओलीको आशिर्वादकै कारण उनले २०७४ सालको निर्वाचनमा काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ बाट टिकट पाएर अत्यधिक मतान्तरले विजयी भए ।
गोकुल बाँस्कोटाको बचाउ गर्दै ओलीले भने- अडियोमा विश्वसनीयता छैन, पत्रु उजुरी हो